ड्रग्स सेवन गरेका चार पुरुषले गरे कुकुरको सामुहिक बलात्कार - Nepal's Online News
ड्रग्स सेवन गरेका चार पुरुषले गरे कुकुरको सामुहिक बलात्कार
प्रकाशित मिति : आइतवार, पुस २२, २०७५
काठमाडौं । बलात्कार एक सामाजिक अपराध हो यो आफैंमा गलत्त हो तर केही नरभक्षीहरुले त्यही गलत्त कामलाई निरन्तरता दिने गर्छन । तपाईले बालिका,महिला अथवा वृद्धा बलात्कार भएको सामान्यतया सुन्नु भएको होला तर आज हामी तपाईलाई अलिक फरक घटनाको बारेमा जानकारी दिदैंछौं । तपाइलाई लाग्ला कत्तैं पुरुष त बलात्कारमा परेको होईन यो अच्चमको विषय होइन पुरुषले पुरुष र महिलाले महिलासँग गर्ने यौन सम्बन्धका बारेमा धेरैंलाई जानकारी छ ।
यो भन्दा पहिले पनि तपाईले मानिसले जनावारलाई बलात्कार गरेको जानकारी पाउँनु भएको छ । यस्तैं, भारतमा चार पुरुषद्वारा सामूहिक बलात्कृत भएको कुकुरको मृत्यु भएको छ । कुकुरलाई यौनाङ्ग काटिएको अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएको थियो । करेज नाम दिइएको उक्त कुकुरको गत बुधबार मृत्यु भएको पशु अधिकारसम्बन्धि काम गर्ने संस्था एनिमल्स म्याटर टु मीले जानकारी दिएको छ । फेसबुक पोस्टमा लेखिए अनुसार कुकुरको पोस्टमार्टमसमेत गरिने छ ।
करेजको बलात्कारपश्चात् अत्यधिक रक्तश्राव र आन्तरिक चोटका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ । करेजलाई ड्रग्स सेवन गरेको भनिएका चार व्यक्तिले बलात्कार गरेका हुन् । स्थानीय अधिकारीले ती चारजनाको खोजी गरिरहेको जानकारी दिएको छ । सुधा फर्नान्डेज नामकी एक युवतीले नोभेम्बर १७ तारिखमा करेजको यौनाङ्ग काटिएको र अत्यधिक पीडामा कराइरहेको देखेपछि घटना सार्वजनिक भएको एसियन एजले बताएको छ ।
एक अटो रिक्सा ड्राइभरले करेजको त्यही दिन बिहान दुई बजे बलात्कार भएको जानकारी दिएको फर्नान्डेजले बताइन् । “उनले कुकुरलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बताए,” फर्नान्डेजलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ । “कुकुरको अगाडिको खुट्टा र मुख बाँधेर बलात्कार गरिएको थियो । कुकुरको चिच्याहटले ती रिक्सा चालकलाई सतर्क बनाएको र उनी घटनास्थल पुग्दा बलात्कारी भागेका थिए ।” एजेन्सी
अनौठो जागिर, ६० दिन सुत्नुहोस् २१ लाख जित्नुहोस्
यी मोडलले २४ करोडमा एक नेतालाई किन बेचिन आफ्नो कुमारित्व ?
५ जना महिलाद्धारा बलात्कारको शिकार भएका पुरुषको दुःखद निधन !
यस्तो बेश्यालय जहाँ सित्तैमा शारिरीक भोक मेटाउन पाईन्छ तर राखिन्छ अचम्मको यस्तो शर्त !